हिलारी विमानस्थल के कारणले असुरक्षित ? - News Of Himalaya, Proud Of Nepal
हिलारी विमानस्थल के कारणले असुरक्षित ?
विकल्प बन्न सक्छ त, स्याङबोचे विमानस्थल ?
शिखर जंग श्रेष्ठ २ बैशाख २०७६, सोमबार १५:५७
सोलुखुम्बु, बैशाख २
बैशाख १ गते विहान तेन्जिङ हिलारी विमानस्थलमा रामेछापको मन्थली विमानस्थलमा पर्यटक लिन उड्दै गरेको समिट एयरको विमान धावनमार्गबाट अनियन्त्रित भएर नजिकै रहेको हेलिपार्किङबाट उड्न लागेको मनाङ एयरका जहाजमा ठोक्एिर तिन जनाको मृत्यू भएसंगै फेरि विमानस्थलको डरलाग्दो पक्षको बारेमा खोजीनिति शुरु भएको छ ।
सन् १९७१ देखि सञ्चालनमा आएको विमानस्थलमा यसअघि पनि हवाई दुर्घटनाहरू भएका छन् । समुद्री सतह देखि २८ सय मिटरको उचाइमा रहेको विमानस्थलमा सन् २००८ मा लुक्ला विमानस्थलमा भएको दुर्घटनामा १२ जर्मन नागरिकसहित १८ जनाको मृत्यु भएको थियो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार यसको लम्बाइ ५२७ मिटर र चौडाइ २० मिटर छ । जुन अन्य विमानस्थल भन्दा छोटो हो । छोटो धावनमार्ग भएकाले उडान र अवतरण दुवै कठिन हुने हवाई विज्ञहरू बताउने गर्छन् ।
के कारणले असुरक्षित ?
अन्तिम अवस्थामा अवतरण सुरक्षित नमानिए विमानस्थलमा विमानलाई सिधा अगाडि वा दायाँबायाँ मोड्न नसकिने बताईन्छ । नागरिक उड्ययन प्राधिकरण लुक्लाका प्रमुख इमनाथ अधिकारीले विमान अवतरणका बेला कारणवस मानिस, कुकुर, स्याल लगायतका जिवजन्तुले धावनमार्गमा समस्या ल्याए ‘गो–अराउण्ड’ संभव नभएको बताए । उनले भने, ‘त्यस्तो बेलामा अरु कुनै विकल्प छैन् ।’ त्यसकारण पनि लुक्ला विमानस्थल विश्वकै बढि जोखिम भएको विमानस्थलको रुपमा चिनिएको छ । अवतरणमा विमान ओरालोबाट हल्का उकालो गुड्ने भएकाले ब्रेकका कारण छोटो धावनमार्ग भएपनि कन्ट्रोललाई संभवन भएको अधिकारीको भनाई छ । छोटो धावनमार्ग भएको हुनाले उड्दा छिटो गति लिन र अवतरणका बेला छिटै रोकिनका लागि विमानस्थलको निर्माण बेग्लै ढङ्गले गरिएको छ । एकछेउमा सात सय मिटर अग्लो भीर भएकाले पनि तेन्जिङ हिलारी विमानस्थललाई संसारकै डरलाग्दो १० विमानस्थलमध्ये एक मानिन्छ ।
सगरमाथाको प्रवेशद्वार मानिएको विमानस्थलको मौसमको भर हुदैन् । हिमाली क्षेत्रमा भएकाले हुस्सु र हावाले उडानमा जटिलता थप्ने विमान चालकहरुले बताउने गर्छन् । विहानी मौसम सफा रहने भएकाले अधिकांश उडान विहानी समयमा हुने गर्छ । सिजनका समयमा विहानी समयमा पनि उडान अबरुद्ध भएको प्रशस्तै उदाहरण छन् । विमानस्थल आसपासका डाँडामा पश्चिमी वायु ठोक्किएर बिचमै हावा घुमिरहने भएकाले पनि चैत–बैशाखमा जहाज नियन्त्रणमा चुनौति देखिने गर्छ । वर्षा र वसन्त ऋतुमा बढी चल्ने हावाले जटिलता थप्दै आएका छन् । लुक्ला विमानस्थलको नाम पछि सगरमाथा आरोही तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र सर एड्मन्ड हिलारीप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै तेन्जिङ हिलारी विमानस्थल राखिएको हो ।
आईतबारको दुर्घटनामा यहि कारणले भयो भनेर भन्न सकिने अवस्था नभएको उड््ययनकर्मीहरुले बताएका छन् । धावनमार्गमा समस्या नभएको नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारले छानविन सकिति गठन गरिसकेकाले सत्यतथ्य कारण आउने आशा गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
आधादर्जन भन्दा बढि दुर्घटना
विभिन्न स्रोतका अनुसार लुक्ला विमानस्थलमा सन् २००३ देखि २०१६ सम्म विमानमार्फत सेवा लिने यात्रुको संख्या ११ लाख ७६ हजार ४ सय ४३ छ । सन् २०१६ मा सबैभन्दा बढी १ लाख १९ हजार ८ सय १ जना यात्रु विमानमार्फत पुगेका थिए । सन् १९७३ यता लुक्लामा साना–ठूला गरी १० भन्दा बढी विमान दुर्घटना भएका छन् । करिब दुई दर्जनले ज्यान गुमाएका छन् । यसअघि सन् १९९८ मा नेपाल एयरलाईन्सको विमान दुर्घटनामा परेको थियो । सीता एयरवेजको डोर्नियर–२२८ विमान लुक्ला विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा १ अक्टोबर २००४ मा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो । लुक्ला विमानस्थलको धावनमार्गमा गोरखा एयरलाईन्सको डोर्नियर–२२० विमान ३० जुन २००५ मा धस्सिएर दुर्घटना भयो । दुर्घटना कसैको ज्यान नगएपनि चालक दलका तीन र त्यसमा सवार नौ जना यात्रु घाइते बनेका थिए ।
खुम्बुपासाङल्हमू गाउँपालिका भित्र पर्ने अर्को विमानस्थल हो, स्याङबोचे । सगरमाथा राष्ट्रिय निकञ्जको क्षेत्रमा निर्माण गरिएको विमानस्थलमा एमआई सेभेन्टिनको हेलिकप्टरले कार्गो सेवा दिदै आएको छ भने विमानले उडान नभरेको बर्षौ भईसक्यो । सरकारले सिङग ईन्जिनका जहाजलाई रोक लगाएपछि रनवे अभावमा जहाज उडाउन छाडिएको हो ।
विमानस्थल संचालनको शुरुमा नेपाल एयरलाईन्स, काष्ठमण्डप र तारा एयरले उडान भरेको थियो । कोङदे भिरमा नेपाल एयरलाईन्सको जहाज ठोक्किएर दुर्घटना भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन पछि स्याङबोचेलाई खुम्बु प्रवेशको विकल्पको रुपमा संचालन गर्न स्तरउन्नतीको काम अघि बढाएको छ । सो अनुसार टोपोग्राफी सर्वे सम्पन्न गरिएको र निकुञ्जसंगको छलफलबाट बाँकी प्रक्रिया अघि बढाईने खुम्बुपासाङल्हमू गाउँपालिका ४ का वडाअध्यक्ष लक्ष्मण अधिकारीले बताए । डबल ईन्जिनका जहाजले उडान भर्नका लागि रनवेको दुरी लम्बयाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।